Indlela yokufumana iiTikiti kwiMidlalo yeMidlalo yaseMasters elandelayo
Uyakufuna enye inhlanhla - kunye neMali yeMali
Ukuba unenhlanhla ngokwaneleyo ukuya kwi- Masters Tournament , ngokuqinisekileyo ufuna ukubuyela emva. Kwaye ukuba awuzange ube khona, mhlawumbi sele usuphupha ngokubhekiselele kwi-Augusta kaZwelonke kwilandelayo.
Iitikiti zeMasters azikwazi ukufumana, kodwa ziphakathi kwetikiti ezinzima kunayo yonke imidlalo. Yaye ukuba unako ukufumana amathikithi eMasters, mhlawumbi kufuneka ifune imali eninzi-mhlawumbi iwaka leedola - ukuthenga enye.
Kodwa kukho ezinye iindaba ezilungileyo: Ngo-2012, i- Augusta National National Club yaqala ukwenza inqaku (elincinci) elincinci leethikethi zethampani ezifumanekayo ukuthengwa ngokusebenzisa umzobo ongenako emva kokubhalisa kwi-intanethi. Iqela liye latshintsha indlela eqhuba ngayo izicelo zethikithi ezijikelezayo, ezifuna ukuba bonke abafunayo itikiti babhalise kwi-intanethi (ukushiya inkqubo ye-imeyile endala).
Ngaphambi kwezi zimemezelo, amathikithi kwiintsuku zeentambo (ukujikeleza enye ukuya kwezine) ayengatholakali kwi-Masters Tournament ngokubanzi kuluntu jikelele ukususela ngo-1972. Ngonyaka, i-Augusta National Golf Club yavula uluhlu lokulinda, kodwa ngenxa yokufuna, ukulinda uluhlu ngokwalo lwalufanele luvaliwe ngo-1978. Iminyaka engamashumi amabini anibini kamva, ngonyaka ka-2000, uluhlu olutsha lokulinda lwavulwa, kodwa ngoku luvalwe.
Kukho ukhetho, nangona kunjalo; ezinye zizithembele kwinqaba kunye nazo zonke ezifuna i-bankroll efanelekileyo. Izinketho zincinci kakhulu kwiintsuku zemiqhubi , kodwa zivule ixesha elide ukuya kwiiMaster zokuqhuba iintsuku.
Iikiti zeMasters Tournament
Iibhenji zeMasters "ziphakathi kweetatikithi ezinqwenelekayo nakweyiphi na isiganeko, ezemidlalo okanye ngenye indlela," ngoBrian Talbot weSihlalo seThikCo Premium.
"Kusuka kwam amava, kukhuselekile ukuthetha oku mhlawumbi iikitikithi ezinzima kunayo yonke emhlabeni," uTalbot uthe, "ngeThikithi zeSupp Bowl eziqhuba isibini esondeleyo, kuxhomekeke kwiiphi na amaqela ezenzayo kunye nalapho i-Super Bowl ibanjwe khona."
Kodwa kukho iwindi elincinci apho abalandeli banokufumana iitikiti ze-Masters zeembononongo ezijikelezayo ngqo ukusuka ku-Augusta kaZwelonke. Unyaka ngamnye, inani elincinci lamatiti libuyiselwa kwi-Masters emva kokufa kwabathengi bexesha elide, okanye ngezinye izizathu. Ngaphambili, ezo tikiti zazisuswa kuphela kumasaza. Kodwa ukususela ngo-2012, abalandeli bayakwazi ukubhalisa kwi-intanethi ukuba bathathe inxaxheba kwimifanekiso engabonakaliyo kula ma tikiti.
Ukuze wenze njalo, abagadi begalufu baninzi babhalisa kwikhasi letikiti eMasters.com; Ababhalisi bafumana isaziso xa inkqubo yenkqubo yetikiti ivuliwe ngonyaka, ilandela nje iMaster. Ababhalisi kufuneka banikele ngolwazi lwekhadi lesikweletu ngexesha le-application process online.
I-Masters ayitsho ukuba zingaphi iikitikiti ezithatha umdlalo zifumanekayo kodwa ziqiniseke ukuba inani lincinci kwaye iimeko zakho zininzi kakhulu, zide kakhulu. Abo bahlala benethamsanqa bayaziswa nge-imeyile kwaye kufuneka bahlawule amathikithi ngelo xesha.
Kodwa ukuba awukho phakathi kwe-fort-lucky enokufumana loo tikiti, yiyiphi enye into enokukhetha ngayo kubalandeli begalufa abanqwenela ukuya kwi-Masters ngexesha lokudlala? Abathengisi bamathikithi yindlela elula kuba bathengisi abaninzi beetikiti baye bathenga amathikithi avela kwi-Masters tikiti zonyaka.
Kodwa ezo tikiti zibiza kakhulu. Iibhenji zethenkethi kumthengisi wetikiti zingase ziqalise i-$ 1,500 kwaye zikwazi ukuphakama eziphezulu njenge $ 12,000 - ithikithi enye.
Njengokuba naluphi na ukuthenga okukhulu, sithengisa phakathi kwabathengi beetikiti ezahlukeneyo ukuze ubone ukuba unokufumana into embi (ukuthetha ngokukodwa). Ubhedu bakho obufanelekileyo kukuthenga ngokukhawuleza ukuba uhamba ngetekethi yomthengisi kwindlela abadayisi abanakho ukunikezelwa ngokukhawulelana (abakhulu, abanomthengisi abaninzi abanokuthi babe netikiti ezili-100 ezikhoyo, ngelixa abathengisi abancinci banokuba neyodwa okanye ezimbini).
I-auction enkulu ye-eBay yinto enye, nangona unako ukufumana ithikithi ezisebenzayo kunetikiti zethampani ngale ndlela.
Kwaye unokuhlala uvele nje ngaphandle kwamasango kazwelonke ka-Augusta nethemba lokuba nethamsanqa nge-scalper. Ithekiti yokuqhawula isitifiketi yenziwa ngokusemthethweni ngo-2001 yi-Legislature yaseGeorgia ngokude nje ukuba kuthengiswa kwenzeka okungenani ii-1,500 iienyawo ukusuka kwindawo yesiganeko, nangona kunjalo, unokuba ngummkeli oswelekileyo wetikiti zobuqhetseba xa usebenzisa le ndlela ukufumana ithikithi, ngoko qaphela xa kuthengwa.
Iikiti zeeMatters Practice
Amathikiti kwiintsuku zoqeqesho zeMasters zilula kakhulu ukuza kuneebheji zentlalo, nangona uya kudingeka inhlanhla encinane kunye nemali eninzi yemali.
Ukusebenzisa amathikithi sele kufumaneka ngokulula kubathengi kunye ne-eBay, kodwa iindaba ezilungileyo kukuba iMatters-day-ticket tickets are available for the public by Masters ngokwabo. Inani elilinganiselwe lamatriki asebenzayo athengiswa kusengaphambili yi-Masters, ngesicelo se-intanethi kuphela. Ingaba ufumana ithikithi - kwaye uninzi kangakanani ufumanayo - ngumphumo wesabelo esingenanto phakathi kwabo bonke abafake izicelo. Kodwa iingxaki zakho zokufumana amathikiti eMasters ukuze usebenze ngokujikeleza kakhulu, kulunge ngakumbi kunokufumana ithikithi zethampani.
Yenza amathikiti ajikelezayo ukusuka kwi-Masters enobungakanani bemi-$ 65. Ukuba ufanele uthenge ngomthengisi wetikiti, uya kuhlawula iindidi ezingamakhulu ama-dollar ngoMatriki nakwiiLibini ezithekiti, mhlawumbi ngaphezu kwe-$ 1,000 kwiikitikiti zangoLwesithathu (ngenxa ye -Contest-3 Contest ).
Yiya kwikhasikiti yamatiti eMasters.com uze ulandele inkqubo yokubhalisa / yokufaka inthanethi. Isicelo seMasters sonyaka ozayo sivame ukuvula inyanga okanye ezimbini emva koMasters walo nyaka siphetha, kodwa ubhalise kwangethuba ukuze uqiniseke ukuba ungaphuthelwa ngeli thuba. Ukulandela umzobo ongenako ukunikezela iikiti zamathambo-ntsuku, iigrafu zentlanzi zikwaziswa nge-imeyile kwaye kufuneka zihlawule ngelo xesha.
Kuphela kufuneka Ubhalise Kanye eMasters.com
Ukuba ubhalisile kuMasters.com kwimifanekiso yesikiti yangaphambilini, awukho isidingo sokukwenza kwakhona.
Xa usesemgangathweni, uza kufumana isaziso xa iqela elilandelayo lekhakiti lokuqala liqala.
Ngaba unemibuzo malunga nenkqubo yokukhatyathwa kweMatters ? Iofisi yeTikiti yeMasters Tournament ingafinyelelwa ngefowuni ngolwazi olungakumbi.
Ngo-1998 iBritish Ivulekile: O'Meara i-Champ Via Playoff
2020 Cup Ryder
Nordea Masters Golf Tournament kwiNdwendwe yaseYurophu
Ngo-1966 US Open: Uxanduva oludumileyo, i-Infamous Collapse
I-PGA Tour AT & T Byron Nelson
Yintoni i-PGA Championship Cut Rule?
2018 IShedyuli yoTyelelo lwaseYurophu
Iingoma zezulu eziphezulu zee-1960
UJoe Rogan - I-Biography
Izinto zokuhlanganisa kunye neeNkonzo
Iingqungquthela ezili-11 zeBuddhist Temples
Indlela yokusebenzisa iItaly Personal Pronouns
Yintoni i-NFPA 704 okanye iDayimane yoMlilo?
Indlela yokusebenzisa ikhandlela le-White Angel Candle Candle
Indlela yokumisela amaZiko okuFunda aKlasini
I-Mars e-Aries - iMpawu zeMars